Ahoana ny fampifanarahana ny lokon'ny sary roa amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Photoshop dia programa tena ilaina amin'ny fanaovana photomontages. Betsaka ny fomba fanamboarana sary nohetezana avy amin'ny sary samihafa. Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao Ahoana ny fandokoana sary roa amin'ny sary ao amin'ny Adobe Photoshop miaraka amin'ny fitaka tsotra ary tena mandaitra. Aza adino izany!
1 Sokafy ny sary roa
2 Safidio ny lohahevitra ary mamorona sarontava sarontava
3 Mamorona sosona fanitsiana vaovao ary apetaho amin'ny layer 2
4 Manaova fanitsiana loko
5 Manitsy ny lesoka
Sokafy ny sary roa
Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy amin'ny Photoshop ireo sary roa izay hampiasainay hanaovana ny photomontage. Araraoty ny fotoana hanokafana azy ireo milamina, sokafy aloha ilay ampiasainao ho lasa ambadika ary apetraho eo amboniny ilay sary misy ilay lohahevitra te-hampiditra an'io fiaviana io ianao. Mba hahafahanao manaraka tsara kokoa ny fampianarana nomeko anarana ireo sosona (sosona 1, ao ambadika sy ilay faritra 2, ilay zazavavy).
Safidio ny lohahevitra ary mamorona sarontava sarontava
Ankehitriny milalao ataovy ny fisafidianana ny lohahevitra. Azonao atao ny mampiasa ny fitaovana fisafidianana izay tianao, handao anao eto aho tutorial izay azonao atao mianatra mampiasa azy ireo ary manaova fisafidianana tsara kokoa miaraka amin'izy ireo. Raha vantany vao azonao ny safidinao dia handeha izahay manova, misafidy, mirodana ary hikapoka pikantsary roa izahay. Tsy misy na inona na inona mitranga raha tsy tonga lafatra ny safidinao, tsindrio ilay marika miseho voamarika amin'ny sary etsy ambony hamorona sarontava misarona izahay ary afaka manamboatra ireo bibikely ireo isika avy eo.
Ampiasao ny baiko + T (Mac) na fifehezana + T (Windows) ary afindra ilay lohahevitra ka manana habe mifanaraka amin'ny aoriana. Aza adino ny mitazona ny safidy (Mac) na alt (Windows) mba tsy hikorontana izy io rehefa manalalaka na mivoaka.
Mamorona sosona fanitsiana vaovao ary apetaho amin'ny layer 2
Tsindrio ny sary famantarana izay miseho marika eo amin'ny sary etsy ambony ary kitiho ny «curves». Misy sosona fanitsiana izao hiseho eo akaikin'ireo sosona. Mila ampiharina amin'ny sosona faharoa fotsiny isika, amin'ilay zazavavy, satria izy no hanamboarantsika ny loko. Ka ny sosona 2 ihany no ampiharina, alao antoka fa hita eo amboniny izy io, ary tsindrio ny sosona fanitsiana, kitiho ny kitendry solosainao baiko + safidy + G (Mac) na fifehezana + alt + G.
Manaova fanitsiana loko
Ny dingana manaraka dia ny tadiavo ny tontonana momba ny fananana (Nomariko etsy ambony io). Mihazona ny safidy fanalahidy (Mac) na alt (Windows) dia tsindrio eo amin'ny «mandeha ho azy». Hisokatra ny varavarankely. Zahao ilay boaty "Mitadiava loko maizina sy mazava" ary alao antoka fa maty ny "Adjust Neutral Midtones".
En Photoshop lasibatra sy cropping lokoAmin'ny alàlan'ny default, manome mainty ny aloka izy ary fotsy ny fisongadinana. Ho an'ny valiny tsara indrindra, ovao ireo loko ireo. Tsindrio ny boaty aloka ary miaraka amin'ny santionan'ny eyedropper ao amin'ny faritra maizina avy amin'ny sary. Amin'ny jiro dia haka ny santionany amin'ny faritra maivana isika. Nialako ny fanaovana azy mivantana amin'ny masoandro satria saika fotsy ary efa hitantsika fa, amin'ireto tranga ireto, tsara kokoa ny miasa miaraka amin'ny loko hafa.
Izay ho azontsika amin'izany fanitsiana mandeha ho azy izany dia efa tena tsara, saingy manadio ny fanitsiana mihetsika teboka samihafa amin'ny fiolahana mandra-pahatongan'ny fitiavanao azy tanteraka.
Manitsy ny lesoka
Manararaotra an'izany manana sarontava sosona izahay, malalaka hijerena ny sisiny ary, miaraka amin'ny borosy, mandoko ny saron-tava mba hanitsiana izay lesoka rehetra mety hanana ilay fifantenana. Tadidio fa miaraka amin'ny loko fotsy dia avelanao ho hita ny ampahany amin'ilay sosona ary miafina amin'ny mainty ianao Ity ny vokatra farany!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fandokoana sary roa amin'ny Adobe Photoshop